ARIMAHA BULSHADA | Bakool.net
Home / ARIMAHA BULSHADA
Madaxweynihii ugu horreeyay ee Email diray
30 sano ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee Dunida loo soo hindisay adeegga internetka ee loo yaqaanno (world wide web), waxaana hadda dib loo xasuusanayaa sidii loo wajahay isticmaalikiisa iyo la qabsashadiisa. Aqoonyahanka lagu magacaabo Sir Tim Berners-Lee ayuu ahaa ninkii fikradda ku saabsan adeeggan soo bandhigay. Iyadoo hadda loo dabaal dagayo 30 sano guuradii kasoo wareegtay horumarkaas lagu ...
Facebook Ma Waxaa loo Adeegsadaa Dano Siyaasadeed?
Dadka adeegsada facebook-ga ayaa sii kordhaya ayadoo ay jiraan fedeexooyin xiriir ah oo ku aaddan sida loo maamulo xogta dadka ee gaarka ah iyo dhaliilo la xiriira isku dayga sharikaddaasi ay ku doonayso in ay ku ciribtirto waxyaabaha xun xun ee bartaas lagu wadaago. Sharikaddan wayn ee ay bulshadu kuwada xiriirto ayaa sheegtay in tirada dadka barteeda iska diiwaan galiyey ...
Maxay Tahay Sababta Gabadhan ay uga Tagtay Sacuudiga?
Basma Khalifa, oo 29 sano jir ah, waxay ku laabatay halkii ay ku dhalatay si ay u aragto haddii ay halkaasi ku noolaan karto, balse hal tallaabo oo khaldan oo aad qaaddo waxay la micno tahay inaadan mar kale ku laaban Karin. Bishii Oktoobar ee sannadkii 2018-kii waxaa la ii sheegay inaan isaga tago Sacuudi Carabiya, dalka aan ku dhashay, ...
Qaxooti Suuriyaan ah oo Quuluubta Dadka Canada Soo jiitay…
13/01/2019	Leave a comment
Ma jirto caruusad jecel in ay waji gabax la kulanto maalinta aroos keeda: Jo Du ayuuse ka halaabay siibkii taashkii ay u soo xiratay xalfadda arooskeeda. Inkastoo aysan ogayn Jo hadana meesha ma oolin wax ay ka walbahaarto. Sababtoo ah albaabka ku xiga waxaa joogay harqaanle, maalmoo uun ka hor yimid Canada kaddib markii uu ka soo qaxay colaadda ka ...
Sheekada Gabar Ka Baxsatay Nolosha Sacuudiga…
Waxay ahayd sheeko dunida qabsatay, taas oo sababtay in wax la iska weydiiyo xayiraadaha saaran haweenka u dhashay dalka Sacuudiga. Rahaf Mohammed al-Qunun, oo 18 jir ah, ayaa dareenka caalamka soo jiidatay toddobaadkii hore kaddib markii ay isku soo xirtay qol ay hoteel ka degganeyd, isla markaana ay diidday in dib loogu celiyo dalkeeda. Waxay ka baxsaneysay qoyskeeda oo ku ...
Gabar sabab yaab leh looga eryey Jaamacad ay wax ka baraneysay
Gabar ardayad ah ayaa laga eryey Jaamacadda ugu faca wayn dalka Masar ee Al Azhar ka dib markii laga daawaday muuqaal iyadoo xabadka ku salaamaysa wiil kale ardayda jaamacada ka mid ah. Video lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujiyay labadaan arday oo ku sugnaa goob maqaayad ah, waxaana ka muuqday Wiilka ardayga ah oo jilba jabsaday kadibna gabadha u dhiibay ...
Ogow sababta ay carruurta dunida ku dhalata ugu badan yihiin wiilal, marka la weynaadana ay dumarka u badan yihiin
25/12/2018	Leave a comment
Muddo ku dhawaad 200 oo sano ah, tiro wiilal ah oo ka badan tan gabdhaha ayaa sannad kasta ku dhasha dalalka England iyo Wales, dadka ku xeel dheer cilmiga caafimaadka ayaana isweydiiyay sababta. Tan iyo markii ay arrintan soo billaabatay sannadkii 1838-kii, hooyooyinka uurka yeesha waxay sanad kasta, oo isku xiga, umulayeen wiilal. Tusaale ahaan, sannadkii lasoo dhaafay ee 2017-kii, ...
Museveni: Quruxdu maahan timo gacan ku samays ah
21/12/2018	Leave a comment
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa dhaliilay gabadha dhawaan ku guulaysatay in ay noqoto gabadha ugu quruxda badan Afrika, Quinn Abenakyo, ee kasoo jeedda dalkaas, asagoo ku dhaleeceeyey in ay xiran tahay timo tobol caaro ah oo Hindiya laga keenay. Madaxweynaha oo hadalkaas ku qoray bartiisa twitter ayaa sheegay in boqoradda quruxda Afrika uu ku dhiirri galiyey in ” quruxdeeda ay ...
Wiil 7 jir ah Oo Sanad Gudihiis Si fudud ku Sameeyey 22 Milyan oo Dollar…
Wiil 7 sanno jir ah oo ka faallooda qalabka ay carruurta ku ciyaaraan ayaa la sheegay inuu noqday qofka lacagta ugu badan ka sameeyay sanadkan barta Youtube sida ay qortay majalladda Forbes. Ryan ayaa ka sare maray dadka Youtube-ka caanka ka ahaa sida ninka lagu magacaabo Jake Paul kaasoo uu ka sareeyay lacag dhan nus malyuun dollar. Waxaa kaalinta seddexaad ...
Daanyeer Wiil Yar Ka Dafay Dhabta Hooyadii Ka Dibna Dilay….
15/11/2018	Leave a comment
Wiil yar oo 12 maalmood oo kaliya dhallan ayaa ku dhintay isbitaal ku yaal magaalada Agri ee woqooyiga dalka India ka dib markii daanyeer uu ka dafay dhabta hooyadii ka dibna uu qaniinay. Sida ay sheegeen qoyska wiilkan yar, daanyeerka ayaa soo galay guri ay hooyada dhashay wiilkan ay naaska ku nuujineysay. Daanyeerka ayaa markii uu willka ka dafay dhabta ...